nepal electricity authority(nepal electricity authority) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
रणनीतिक रुपमा विद्युत् चुहावट घटाउने ध्याउन्नमा प्राधिकरण, पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था
- रमेश लम्साल काठमाण्डौ । विद्युत् चुहवाट रोक्नु थप विद्युत् थप गरेजस्तै हो । यसमा अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ। यही धारणालाई शिरोपर गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले परिणाम देखिने गरी देशव्यापी रुपमा नै चुहावट घटाएको छ । विशेषतस् चुहावट प्राविधिक र गैरप्राविधिक हुने गरेको छ । प्राविधिक चुहावटमा प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर तथा...
-रमेश लम्साल तीन वर्ष पहिले नियमित विद्युत् पाउनु नै नेपालीका लागि ठूलो सपना जस्तै थियो । विद्युत्को माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन नहुँदा देशले चर्कोरुपमा विद्युत्भार कटौतीमा पर्नुपरेको थियो । पछिल्ला दिनमा धेरैले असम्भव जस्तै मानेको नियमित विद्युत्को उपलब्धता पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतका नयाँनयाँ योजना अगाडि...
विद्युत प्राधिकरणले २५% साधारण सेयर बिक्री गर्ने
काठमाण्डौ । प्राधिकरणले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भनेका छन्, “चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत शेयर बिक्रीको तयारी गरिएको छ, तर त्यसका लागि प्राधिकरणको घाटा पूर्णरुपमा नाफामा परिणत हुनुपर्नेछ ।” प्राधिकरणले...
कुलमानको कमाल: प्राधिकरणको नाफा रु. ७.२० अर्ब, चुहावटमा ५.१३ % ले कमी
सरकारी स्वामित्वका संस्थान घाटामा जाँदा सधैँ सरकारका लागि टाउको दुःखाइको विषय बनिरहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने अन्य संस्थानको तुलनामा आफूलाई फेरि पनि अब्बल साबित गरेको छ । पछिल्लो दश वर्षयता निरन्तर घाटा व्यहोर्दै आएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आफ्नो नाफाको यात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । प्राधिकरणले गत...
विद्युत् प्राधिकरणमा सहायकदेखि प्रबन्धकसम्म ६५५ जनाका लागि जागिर खुल्यो
काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार ठूलो संख्यामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी आपूर्ति गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले सहायक स्तरका कर्मचारीदेखि १० औँ तहसम्मका लागि एकैपटक ६५५ जना कर्मचारी माग गरेको हो । यी पदमा प्राधिकरणले खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो...
कुलमानको कमाल : ८ अर्ब बढी वार्षिक घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरण पहिलोपटक नाफामा !
-रमेश लम्साल काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रक्षेपित भन्दा बढी आम्दानी हुने जनाएको छ । सो आवमा प्राधिकरणले रु एक अर्ब एक करोड खुद नाफा आर्जन हुने लक्ष्य राखेकोमा अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि प्रक्षेपित वार्षिक खुद नाफा अझै बढ्न सक्ने दावी गरेको हो । गत आवमा प्राधिकरणको सञ्चालन मुनाफा रु सात अर्ब...
प्राधिकरण र चिलिमेको अगुवाईका २२८ मेगावाटका आयोजना निर्माण धमाधम, २०७६ भित्रै सक्ने योजना
काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा रसुवा र नुवाकोटमा २२८.३ मेगावाटका आयोजनाको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । काममा कुनै अवरोध नआएमा सबै आयोजनाको निर्माण २०७६ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र चिलिमको मुख्य प्रवद्र्धकत्वमा १११...
लोडसेडिङ छैन र हुँदैन : प्राधिकरण
काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याबाहेक कुनै पनि अवस्थामा विद्युत्भार कटौती नहुने स्पष्ट पारेको छ । विगत केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विद्युत्भार कटौती हुने आशयका समाचार सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणले बत्ती ननिभ्ने प्रष्ट पारेको हो । हाल औद्योगिक ग्राहकलाई दैनिक तीन घण्टाबाहेक...
विद्युत महसुलका लागि लाइन बस्ने युगको अन्त, अब मोवाइलबाटै भुक्तानी !
काठमाण्डौ । महसुल तिर्नैका लागि विद्युत प्राधिकरणमा गएर लाइन बस्ने झञ्झट व्यहोर्नु हुँदैछ ? यदि त्यसो हो भने अब तपाईको यस्तो झञ्झट अन्त हुने भएको छ । अब देश विदेशमा बस्नेले आइएमई पेमार्फत विद्युत महसुल घरमै बसी–बसी आफ्नो स्मार्टफोनबाट भुक्तानी गर्ने सुविधा आएको छ । यो सुविधासँगै बिल तिर्न प्राधिकरणको बिल काउण्टरमा गएर लामो लाइन...
विद्युत प्राधिकरणको मोबाइल एप: महसुलदेखि लोडसेडिङसम्मको जानकारी पाइने
काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘एनइए अफिसिएल’ नामक मोबाइल एप्लिकेसनसमेत सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। प्राधिकरणको आइटी विभागले तयार पारेको सो एप्लिकेसनमा प्राधिकरणका सबै गतिविधि उपलब्ध हुनेछ। ग्राहकले आफ्नो विद्युत् महसुल कति उठेछ भन्नेसमेत हेर्न सक्नेछन्। यस्तै गुनासो पनि सोही एप्लिकेसनमार्फत गर्न सक्नेछन् भने...
मोबाइलबाटै विद्युत महशुल तिर्न सकिने, देशभर १५ हजार आउटलेट
काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महशुल तिर्न लामो लाइनमा बस्नु भएको छ ? वा न्यूनतम महशुल तिर्नसमेत बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको छ भने अब तपाईंले त्यस्तो झन्झट व्यहोर्नु पर्ने छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत अनलाइन प्रणालीबाट सहजै रुपमा महशुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा...
लोडसेडिङ हटाएका कुलमानको कमाल, प्राधिकरण बित्तीय स्वस्थतातर्फ उन्मुख
काठमाण्डौ । विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर निकै ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा करिब सात अर्ब रुपैयाँको डरलाग्दो घाटालाई ९८ करोडको हाराहारीमा झार्ने सफलता पाएको छ । व्यवस्थापनले सुधार तथा चुुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिंदा एकवर्षको अवधिमै यति ठूलो सफलता हात लागेको हो । बिहीबार विद्युत...
बाढीका कारण देशभरका ३० बढी विद्युत वितरण केन्द्र र विद्युत गृह ठप्प
काठमाण्डौ । बर्षा र बाढीका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका देशभरका ३० भन्दा बढी प्रसारण तथा वितरणलाइन, सवस्टेशन र विद्युत गृहहरुमा क्षति पुुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । उसका अनुसार पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल तथा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गतका ती संरचनाहरूमा बाढीका कारण क्षति पुगेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी...
कुलमान घिसिङ र जनार्दन शर्माले ६८ करोड भ्रष्टाचार गरेका भन्दै सांसदहरुद्वारा छानबिनको माग
काठमाण्डौ । सांसदहरुले २५ मेगावाटको सोलार ग्रीड आयोजनाको टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पूर्व उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन हुनुपर्ने एउटै स्वरमा माग गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्ने...
बिजुलीको नयाँ दर प्रस्ताव, घरायसी ग्राहकलाई १० युनिटको ६० रुपैयाँ मात्र !
►रमेश लम्साल काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साधारण घरायसी ग्राहकलाई थप भार नपर्ने गरी नयाँ विद्युत् महसुल प्रस्ताव गरेको छ । घरायसी ग्राहकले औसतमा १० युनिट विद्युत् प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले ती वर्गका ग्राहकले रु ६० मात्रै महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो । ...
नेपाल सेवा लघुवित्तद्वारा २.६२% लाभांश प्रस्ताव
प्रभु बैंकको शाखा विस्तारमा ‘डबल सेन्चुरी’, बरहथवामा नयाँ शाखा
शिवम् सिमेन्ट विद्युतको रु. डेढ अर्ब महसुल नतिर्ने दाउमा, प्राधिकरणले दियो सातदिने समयसीमा